Ajax, falanqaynta nidaamka amniga wireless ka dhaqso badan in la hirgaliyo | Androidsis
Miguel Gaton | | Qalabka kale, Amniga
U dejinta nidaamkaaga amniga gurigaaga ama meheradaada waa lacag badbaadin fiican marka lagu daro inaad ka faa'iideysato awood u lahaan kartid baahiyahaaga iyo dookhaaga. Ajax waxay na siisaa nidaam u gaar ah oo buuxiya astaamahan.
1 Kordhin karo lana beddeli karo
2 Qalabka Ajax
3 Rakibaadda iyo qaabeynta
4 Hal lacag bixin, lacag la'aan
Kordhin karo lana beddeli karo
Waqtiyadu waa ku xun yihiin in guriga lagu waayo nidaam nabadgelyo, ama hoyga caadiga ah ama (kaaga sii daran) degenaanshaha labaad. Xulashada degdegga ahi waa in la waco shirkad kasta oo nabadgelyo leh oo guriga lagu soo ururiyo, laakiin taasi waxay ka dhigan tahay inaan ku koobnaano xirmooyinka ay na siinayaan ama ay ku bixiyaan dheeri ahaan khidmadda bil kasta wixii isbeddel ah ee aan ku darno. Beddelka kale ee ugu dhakhsaha badan waa nidaamka amniga ee Ajax na siiso.
Doorashadan ayaa ah si buuxda loo hagaajin karoWaad dooran kartaa qalabka aad doonayso inaad ku rakibto marka hore gurigaaga, si aad hadhow u ballaadhiso rakibaadda oo aad markaa ugu dhejiso nidaamka rabitaankaaga adigoon jeebkaagu ka dareemin. Oo intaas oo dhammu waxay la leeyihiin waayo-aragnimo ah nooc u heellan nidaamyada amniga, oo na siiya hawlo iyo qalabyo aan nidaamyada kale ee otomatiga guryaha xitaa ku riyoon karin. Intaa waxaa dheer, waad ka xakameyn kartaa taleefankaaga casriga ah, sidaas raaxo leh.
Nidaamka amniga Ajax maku qancinayaa? Waa hagaag waad ku iibsan kartaa qiimaha ugu fiican ee isku xirahan.
Xirmooyinka kala duwan ee aan ka heli karno bogga Ajax waxaan falanqeyneynaa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran, oo ka kooban qalabyada soo socda:
Saldhigga Hub 2: waa udub-dhexaadka nidaamka oo dhan, kaas oo qalabka intiisa kale ay ku xiran yihiin. Wuxuu ku xiraa router-ka weyn ee guriga iyadoo la adeegsanayo fiilada Ethernet, wuxuuna fursad u leeyahay inuu si buuxda iskiis u shaqeeyo iyadoo ay ugu wacan tahay batteriga leh 16 saacadood oo ismaamul ah iyo labo boos oo kaararka microSIM ah, sidaas darteed haddii korontadu tagto, nidaamku wuxuu sii wadi doonaa inuu ku shaqeeyo dhibaato la'aan. .
Kiiboodhka KeyPad wireless-ka ah: badhanka lambar si aad awood ugu yeelatid inaad kudhaqaajiso oo aad u joojiso nidaamka.
Jeebka fog SpaceControl si loo xakameeyo nidaamka digniinta iyo badhanka digniinta wireless / badhanka smart Waxay leedahay qaab argagax iyo qaab lagu xakameeyo dhacdooyinka otomatiga guriga.
HomeSiren seren-ka gudaha, wireless-ka waana howlgashaa marka alaarmiga daco.
Daaqada DoorProtect iyo Sensor Door si loo ogaado furitaanka iyo xiritaanka daaqadaha iyo albaabada.
MotionCam dareeraha dhaqdhaqaaqa, kaas oo kaliya aan ogaanin dhaqdhaqaaqa laakiin sidoo kale wuxuu sawiraa sawirada kuwa soo duulay oo leh 640 × 480 xal.
FireProtect qiiqa iyo qalabka kuleylka taas oo dhaqaajineysa alaarmiga haddii ay dhacdo inuu si kedis ah u kordho heerkulka ama qiiqu. Waxay leedahay seerin u gaar ah si ay ugu shaqeyn karto si ka madax bannaan nidaamka Ajax.
Daad-daaha Daryeelka Dheecaanka Biyaha in la dhigo meelahaas oo ay ka daadan karaan biyo (mashiinka dharka hoostiisa, mashiinka weelka lagu dhaqo, haanta biyaha, iwm.)
Smart Plug Socket, oo leh shaqooyinka otomatiga guriga sida otomaatiyada iyo barnaamijyada, taasina waa lala socon karaa isticmaalka tamarta aaladda aan ku xirno.
Dhammaan qalabyadan, marka laga reebo xarunta Hub 2, Waxay leeyihiin muuqaal muhiim u ah: 100% wireless. Uma baahnid inaad raadiso wax fiilo ah oo ku habboon iyaga, maxaa yeelay dhammaantood waxay leeyihiin batteri leh muddo aad u dheer (dhowr sano xitaa) oo sidoo kale lagu beddeli karo isticmaalaha laftiisa. Mana aha inaad ka walwasho isku xirka bartamaha midkoodna, tan iyo markii isku xidhka “Jeweler” uu gaadho daboolis dhan 2000 mitir, taas oo in ka badan ku filan guri kasta ama ganacsi kasta.
Rakibaadda iyo qaabeynta
Ajax waxay kugula talineysaa dadka isticmaala inay doortaan rakibo xirfadle ah maadaama ay ka hortageyso digniinta beenta ah, waxay hubineysaa in dhammaan dariiqyada gelitaanka ee suurtogalka ah ay daboolan yihiin, waxayna damaanad qaadeysaa hawlgalka nidaamka qumman. Kiiskeenna ma ahayn wax loo baahdo maadaama aan khibrad u leenahay nidaamyada digniinta kale waxaanan awoodnay inaan isku nimaadno annaga oo aan wax dhibaato ah qabin.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa rakibidda barnaamijka Android (isku xirka). Markaad furto arjiga waad habeyn kartaa saldhigga Hub2 ka dibna mid mid ugu dar dhammaan qalabka aad rabto inaad rakibato adoo iskaan u furaya lambarka QR oo mid waliba ku jiro. Daqiiqado yar gudahood waxaad kuheleysaa nidaamka oo dhan oo aad diyaar u tahay inaad tagto.
Waa codsi aad u fudud oo wax looga qabanayo, oo leh menus aad u macquul ah oo aad ku arki karto dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah adigoon marin menus aad u tiro badan. Waxay sidoo kale la midoobaysaa nidaamka aqoonsiga ee taleefankaaga casriga ah si looga hortago qof kasta inuu marin u helo. Waxaad arki doontaa xaaladda batteriga ee dhammaan qalabka, tayada isku xirka iyo ogeysiisyada dhammaan dhacdooyinka in nidaamku ogaaday. Dejinta gudaheeda, xulashooyinka qaabeynta ayaa ah kuwo aan dhammaad lahayn, oo awood u leh inay dejiyaan heerka xasaasiga ah ee qalabka, dejiyaan barnaamijyada hawlgalka, iwm.
Haddii aan rabno inaan ku darno qaar adeegsadayaasha ah dalabka sidoo kale waa suurtagal, in la siiyo. Helitaanka aan xadidnayn ama kumeelgaarka ah ee alaarmigayaga, ku habboon marka xubnaha qoyska ama martidu ay guriga yimaadaan. Ajax sidoo kale waxay leedahay xusuusino si ay u kiciso ama u joojiso alaarmiga markaan ka tagno guriga ama aan u nimaadno, waa wax weyn inaanu u boodin waaberiga markaad guriga la noqotid ka dib casho asxaabta.
Hal lacag bixin, lacag la'aan
Tani waa qaybta ugu wanaagsan ee nidaamkan: majiro lacag bille ah oo qarsoon. Adigu waxaad iibsaneysaa nidaamkaaga, waxaad iibsaneysaa qalabka aad rabto, waana halka ay lacag-bixintu ku dhammaato. Ma jiro ujrooyin kaladuwan oo kuxiran tirada aaladaha ku xiran, ama howlaha aad rabto inaad ku darto.
Sikastaba xaalku ha noqdee, hadaad doorbideyso inaad kireysato nidaam amni oo dheeri ah, Ajax waxay na siisaa liis dheer oo shirkado ah oo la jaan qaadaya nidaamkiisa, oo ay ku jiraan kuwa ugu caansan wadankaaga.
Nidaamka amniga Ajax
Majiro lacag bille ah
Qaab-dhismeed iyo customizable
Looma baahna in la rakibo fiilooyin
Ma lahan kaamirooyin sumad u gaar ah leh
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Ajax, falanqaynta nidaamka amniga wireless ugu dhaqsaha badan ee la hirgeliyo
Wiko Y81: Xadka gelitaanka cusub oo leh laba maalmood oo ismaamul ah
Motorola Razr 5G, taleefanka casriga ah ee isku laaban ayaa la bilaabay illaa 1.500 euro